Hevitra MPANOHARIANA | Jolay 2008 | 2
Madagasikara: Vola sandoka manantsanda (be valera)
2008-07-19 @ 08:10 in Toekarena
Asa ianareo raha mahatsikaritra fa mbola manan-tsanda ihany (izany hoe misy valerany e!) ihany ny vola sandoka eto Madagasikara ary mino aho fa mbola betsaka noho ny dôlara tena izy Zimbaboeana ny sandan'ny vola sandoka ariary Malagasy.
Izao manko, any ambanivohitra lavitra any no tena fanakalozan-dry zalahy vola ariary sandoka amin'ny vola tena izy, mahazo ny atsasaky ny tena sanda ny vola sandoka rehefa voatakalo any ary indraindray mahatratra ny sanda mitovy mihitsy rehefa amin'ilay harivariva mahafitaka ny tsy mitandrina iny, na amin'ny fotoana mampikoropaka ny mpivarotra iny.
Fa ny tena manome sanda ambony ny vola sandoka malagasy dia ny mpanao gazety malagasy ihany. Miala tsiny raha mamely fantsy ny mpanao gazety amin'ity indray mitoraka ity satria fanitsiana fahazaran-dratsy ihany ity. Rehefa tratra manko ireny mitondra sy mampiasa vola sandoka ireny ka mitatitra ny mpanao gazety malagasy dia ilay sanda sandoka (tsy izy akory) no tena abaribary, vola sandoka 1.000.000 ariary no tratra tany amin-dranona... Vola sandoka ve dia hanana sanda sady amin'izay 1.000.000 ariary be izao? Azo ividianana inona io vola sandoka lazaina fa 1.000.000 ariary io? Fahitalavitra sa solosaina? Mba eritrereto ihany.Efa nahagaga ahy hatry ny ela manko io fanomezana sanda vola sandoka eto Madagasikara io ary efa tiako ahitsy fa tsy tadidy hahatery ahy hanoratra raha tsy nahatsikaritra ny fitateran'ny vahiny ny vaovao rehefa nisy nahatrarana vola sandoka. Ilay noeritreretiko mihitsy manko no nilazany azy: Ravi-taratasy 1000 natao vola sandoka no tratra tany amin-dranona... ary tsy nilaza sanda mihitsy izy satria taratasy tsotra nanaovana hosoka ihany no sandany. Marina fa tsy mandeha ny tsena raha tsy misy ny fanaitairana kely nefa anisan'ny filazana lainga ihany amiko raha omena sanda tsy azy akory ny vola sandoka. Sa tsy mety ny eritreritro?
Resaka vola ihany isika eto ka manararaotra kely hilaza ny amin'ity resaka lazaina fa fananganana ny sampan-draharaha miady amin'ny famotsiambola notokanana omaly ity aho (Samifin). Ny rehetra kosa hatramin'ny fitondram-panjakana no toroako eto. Araka ny hita moa dia ny tranon'i Sophie Ratsiraka, na nipetrahan'ny fianakaviana Ratsiraka, tao Faravohitra no misy ity sampan-draharaha vaovao ity. Filazana tsotra ny ahy fa tsy fantatro manko io na an'ny fanjakana na efa novidian'ny fianakaviana Ratsiraka. Aleo an'ny mpanadihady katraka no manao izay hamantarana ny tena tompon'ny trano.
Araka ny fahalalako manko dia eto Madagasikara no be vola maloto indrindra manerantany ka mila diovina maika ary beazina hanaja ny vola tsy ho simba sy haloto ny Malagasy. Tokony hisy lalàna mipetraka manafay izay tratra mandoto sy manimba ny vola malagasy mihitsy aza. Tsy io resaka vola simba sy maloto io tsy akory no tsy tian-dRavalomanana Marc, Filoham-pirenena Malagasy, iadiana ny famotsiana azy fa vola tsara tarehy sy madio nefa lazaina ho maloto noho ny teny frantsay manambara azy ho "argent sale" ka ilaina atao "blanchiment". Hita kosa eto ny fahasamihafan'ny kolontsaina frantsay lasa tahafin'ny teny malagasy nefa tsy mifanaraka fisaina sy fitenenana ary mahazatra malagasy.
Raha ny fomba fiteny mahazatra ny manampahaizana sy ny manampahefana Malagasy manko heverina dia toa vao maika hampirisika sarambambe malagasy hanimba sy handoto ny vola malagasy ny fomba filazana azy amin'ny teny Malagasy. Raha ny tokony ho fiteny sy izarana ny Malagasy rehetra dia ny fitenenana azy ho toy ny hoe fampiverenana ny vola azo tamin'ny tsy rariny sy tsy ara-dalàna (rongony, fanerena olona hivarotena, fivarotana olona,fitaovam-piadiana...) ho amin'ny tsenam-bola manara-penitra amin'ny fomba hafa. Lava tena lava izany filazana izany, azo atao fifaninanana ny itadiavana ny teny sy fomba filaza fohy, nefa tsy maintsy atao mba tsy hampifandiso ny fisainan'ny be sy ny maro mety tsy hahatakatra ity fomba vaovao manerantany ity. Fa angaha ity vola malagasy ity tadiavina hitoetra eny an-tsena mandrakariva e!